संयुक्त आन्दोलन गरे ओली सरकार एक हप्तामा ढल्छ : बाबुराम भट्टराई – yuwa Awaj
माघ २५, २०७७ आइतबार 14
धनकुटा : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त आ,न्दोलन गरे केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार एक हप्तामा ढल्ने दा,बी गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका बाबुरामले शनिबार धनकुटामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
अ,संवैधानिक कदमकोवि,रुद्ध नेकपा सडकमा छ । नेकपासहित सबै पार्टी मिलेर एक हप्ता सडक संघर्ष गर्ने हो भने वर्तमान सरकार ढल्छ’, बाबुरामले भने । उनले नेपाली जनता सडक संघर्षमा जानुको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
भट्टराईले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको प्रतिक्रान्तिपछि केपी ओलीले प्रतिक्रा,न्ति गरेको आ,रोप लगाए । जनता समाजवा,दी पार्टी नेपाल धनकुटाले शनिबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाली जनताबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई ध,म्की दिइरहेका छन’, उनले भने, ‘तर अदालतले नेपाली जनता र संविधानको पक्षमा काम गर्नेछ ।
Prevप्रधानमन्त्रीको लागि लडिएको होईन् जनताको लागि हो: प्रचण्ड
Nextओली र हामीलाई उस्तै भन्दा अ’न्याय हुन्छ : प्रचण्ड
ओली जी सर्वैसर्वा हैनन ! उनी नहुँदापनि देश र पार्टी चल्छ – सांसद विडारी !